Shanduro - Shoko reShoko Foundation • Kutangisa kuChirangaridzo neKuparadzwa
Isu tinofara kukupai otomatiki dudziro yezvese HTML zvirimo pane yedu webhusaiti. Dudziro dzinoitwa nekombuta uye inowanikwa mumitauro ye100. Izvi zvinoreva kuti mabasa ese aHarold W. Percival anokwanisa kuverengerwa nevanhu vazhinji pasi rose mumutauro wavo. Mhando dzePDF dzemabhuku aPercival uye zvimwe zvakanyorwa zvinongoramba zvirimo muChirungu. Aya mafaera ndeyekudzokorora kwemabasa ekutanga, uye rudzi urwu rwekujeka hakuna kutarisirwa mushanduro dzeatomatiki.
Mukona yepazasi pekona imwe neimwe peji, pane mutauro wakasarudzwa uyo unokutendera iwe kushandura peji kuenda kumutauro waunosarudza:
Nokudzvanya pane anosarudza, ungasarudza mutauro waunoda kuverenga.
Isu tiri zvakare kukupa iwe Sumo ye Kufunga Nekupedzisira mune mitauro mishoma iyo vazvipiri vauya kuzogadzira. Ivo vakanyorwa pazasi alfabeti.
Chitsauko chekutanga ichi chinosuma dzimwe dzenyaya dzakatariswa mubhuku iri. Iyo inopa muverengi kamwechete mamiriro uye chitubu chebhuku rese. Nekuda kweizvi, isu tinopa vanhu-mhando shanduro dzeSumo kana tichigona. Isu tinotenda zvikuru vanozvipira avo vakabatsira Izwi reNzwi kuti dudziro dzeichi chitsauko chekutanga chiwanikwe. Ndokumbirawo utibate kana iwe uchida kupa shanduro dzeSumo mune mimwe mitauro.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (ChiGerman: Mharidzo Kufunga Nekupedzisira)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Esperanto: Nheyo ye Kufunga Nekupedzisira)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (Dutch: Mharidzo Kufunga Nekupedzisira)
Русский: Введение в Мышление и судьба (Russian: Mharidzo Kufunga Nekupedzisira)
Zvakawanda zvehurukuro dzichaita sezvisingazivikanwi. Vamwe vavo vangave vachitya. Unogona kuwana kuti vose vanokurudzira kufungisisa. HW Percival